GRN SPORTS – GRNSports NEPAL
नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा युवा तथा खेलकुदतर्फ २ अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।
अर्धमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिवार सिंहदरबार पुगेर सार्वजनिक गरेको बजेटमा युवा तथा खेलकुदतर्फ बजेटमा ३८ करोड वृद्धि भएको छ । जारी आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुदको बजेट २ अर्ब ३६ करोड थियो ।
कोभिड-१९ को समयमा आएको कूल १६ अर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेटमा सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन छ । त्यस्तै स्वास्थ्यमा पनि सबा खर्ब बजेट छुट्टयाइएको छ ।
युवा तथा खेलकुदम यस पटक बजेटमा १३ बुँदा समावेश गरिएको छ । जसमा युवातर्फ युवाको सार्थक सहभागिताको लागि युवा लक्षित कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कोष, युवा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना र स्काउट विस्तार कार्यक्रम रहेको छ भने खेलकुदतर्फ धेरै जसो भौतिक पूर्वाधारकै कुरा समेटिएको छ ।
खेलकुदमा दुई नयाँ कार्यक्रम निवृत्त भएका खेलाडीलाई व्यावसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने व्वयस्था छ र नेपाललाई खेल पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खेल विद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।
अन्य पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
खेलकुदतर्फको कार्यक्रम ९ बुँदामा
· समुदायस्तरदेखि नै खेलकुदको विकास र विस्तार गरी शारीरिक र मानसिक रुपमा स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको सम्मान अधिवृद्धि गर्न खेलकुद पूर्वाधार विकास, खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना, खेलकुद प्रशिक्षण सञ्चलन तथा प्रतिभावान खेलाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था
· झापाको दमकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मदन भण्डारी रंगशाला दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण सुरु गर्ने
· मोरङको वैद्यनाथपुर, काठमाडौंको मुलपानी, रुपन्देहीको भैरहवा, दाङको लमही, बाँकेको नेपालग्नज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन, आगामी वर्ष पोखरा रंगशाला निर्माण सम्पन्न गरिने
· सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने व्वयस्था गर्ने
· धनगढी, विरेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, वीरगन्ज, जनकपुरधाम र इटहरीमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माण अघि बढाइने । सबै स्थानिय तहमा खेल पूर्वाधार निर्माण गरिने । आगामी आर्थिक वर्षमा १ सय ६८ स्थानिय तहमा खेलग्राह निर्माण गर्न रकम छुट्टयाएको ।
· सोलुखुम्बु, सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा हाई अल्टिच्युड स्पोर्ट्स सेन्टर निर्माण गर्न आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको ।
· आगामी आर्थिक वर्ष नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक हासिल गर्न सम्भाव्य खेल पहिचान गरि प्रोत्साहन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता वृद्धि गरिनेछ ।
· नेपाललाई खेल पर्यटनको उत्कृष्ट गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल विद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ।
· युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि रु २ अर्ब ७४ करोडको बजेट विनियोजन
Posted bynepalgovin May 30, 2021 Posted inUncategorizedLeaveacomment on १३ बुँदामा युवा तथा खेलकुदको बजेट
‘मिनी विश्वकप’को रुपमा परिचित युरोकप २०२० आगामी जुन ११ देखि जुलाई ११ (जेठ २८ देखि असार २७) सम्म आयोजना हुँदैछ । २०२० मै हुनुपर्ने युरो कोरोनाभाइरस महामारीले गर्दा एक वर्ष पछि सारिएको थियो ।
१६औं संस्करण युरोकप युरोपका विभिन्न ११ देशका ११ शहरमा आयोजना हुँदैछ । युरो सुरु भएको ६०औं वर्षगाँडको अवसरमा युरोकप धेरै देशमा आयोजना गर्न लागिएको हो ।
युरोकपमा सहभागि हुने २४ टिमलाई ६ समूहमा विभाजन गरिएको छ । प्रत्येक समूहको समूह विजेता र समूह उपविजेता सँगै तेस्रो हुनेमध्येको उत्कृष्ट चार टोलीले प्रिक्वाटरफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन् ।
यस पटक युरोकप नेदरल्याण्ड्सको आम्स्टरडाम, अजरवैजानको बाकु, स्पेनको सेभिया, रोमानियाको बुकारेस्ट, हंगरीको बुडापेस्ट, डेनमारकको कोपनहेगन, स्कटल्याण्डको ग्लास्गो, जर्मनीको म्युनिख, इंग्लयाण्डको लण्डन, इटलीको रोम र रसियाको सेन्ट पिटर्सवर्गमा आयोजना हुनेछ ।
युक्रेनको किभमा सन् २०१२ को युरो फाइनल अघि तात्कालिन युइएफए अध्यक्ष मिचेल प्लाटिनीले २०२० को युरोकप एक वा जोइन्ट होस्ट भन्दा १२ वा १३ देशमा आयोजनाका लागि प्रस्ताव गरे ।
युरो सुरु भएको ६० वर्ष पुगेको अवसरमा तात्कालिन युइएफए अध्यक्ष प्लाटनीले आयरल्याण्डको डब्लिनदेखि अजरवैजानको बाकुसम्म युरो आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसै वर्ष डिसेम्बरमा युइएफएले २०२० को युरो धेरै देशमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समूह ए मा रहेका टर्की र इटलीबीच रोममा उद्घाटन खेल हुनेछ । सेमिफाइनलर फाइनल खेल लण्डनमा हुनेछ ।
युरोकप २०२० मा समूह चरणमा ३६ र नकआउट चरणमा १५ गरी कूल ५१ खेल हुनेछ ।
यस्तो छ विभाजन र खेलतालिका
१६औं युरोकप (युरो २०२०)
११ जुन–११ जुलाई २०२१ (२८ जेठ-२७ असार २०७८)
समूह ए (रोम/बाकु) : टर्की, इटाली (आयोजक), वेल्स, स्वीट्जरल्यान्ड
समूह बी (कोपेनहेगन/सेन्ट पिटर्सवर्ग) : डेनमार्क (आयोजक), फिनल्यान्ड, बेल्जियम, रसिया (आयोजक)
समूह सी (आम्स्टरडम/बकारेस्ट) : नेदरल्यान्ड्स (आयोजक), युक्रेन, अष्ट्रिया, नर्थ मेसेडोनिया
समूह डी (लन्डन/ग्लास्गो) : इंग्ल्यान्ड (आयोजक), क्रोएसिया, स्कटल्यान्ड (आयोजक), चेकरिपब्लिक
समूह ई (सेभिया/सेन्ट पिटर्सवर्ग) : स्पेन (आयोजक), स्वीडेन, पोल्यान्ड, स्लोभाकिया
समूह एफ (म्युनिख/बुडापेस्ट) : हंगेरी (आयोजक), पोर्चुगल (साविक विजेता), फ्रान्स, जर्मनी (आयोजक)
सेन्ट्रल युरोपियन टाइम (सीइटी) अनुसार सबै खेल सुरु हुनेछ । नेपालमा भने ३ घण्टा ४५ मिनेट अगाडि खेल सुरु हुनेछ ।
नेपालमा ६:४५, ९:४५ र १२:४५ बजे खेल सुरु हुनेछ ।
शुक्रबार ११ जुन (जेठ २८ गते)
१. समूह ए: टर्कीविरुद्ध इटाली (राति १२:४५ बजे/रोम)
शनिबार १२ जुन (जेठ २९ गते)
२. समूह ए: वेल्सविरुद्ध स्वीट्जरल्यान्ड्स (साँझ ६:४५ बजे/बाकु)
३. समूह बी: डेनमार्कविरुद्ध फिनल्यान्ड (राति ९:४५ बजे/कोपेनहेगन)
४. समूह बी: बेल्जियमविरुद्ध रसिया (राति १२:४५ बजे/सेन्ट पिटर्सवर्ग)
आइतबार १३ जुन (जेठ ३० गते)
५. समूह डी: इंग्ल्यान्डविरुद्ध क्रोएसिया (राति ६:४५ बजे/लन्डन)
६. समूह सी: अष्ट्रियाविरुद्ध नर्थ मेसेडोनिया (राति ९:४५ बजे/बुकारेस्ट)
७. समूह सी: नेदरल्यान्डस्विरुद्ध युक्रेन (राति १२:४५ बजे/आम्स्टरडम)
सोमबार १४ जुन (जेठ ३१ गते)
८. समूह डी: स्कटल्यान्डविरुद्ध चेक रिपब्लिक (राति ६:४५ बजे/ग्लास्गो)
९. समूह ई: पोल्यान्डविरुद्ध स्लोभाकिया (राति ९:४५ बजे/सेन्ट पिटर्सवर्ग)
१०. समूह ई: स्पेनविरुद्ध स्वीडेन (राति १२:४५ बजे/सेभिया)
मंगलबार १५ जुन (असार १ गते)
११. समूह एफ: हंगेरीविरुद्ध पोर्चगल (राति ९:४५ बजे/बुडापेस्ट)
१२. समूह एफ: फ्रान्सविरुद्ध जर्मनी (राति १२:४५ बजे/म्युनिख)
बुधबार १६ जुन (असार २ गते)
१३. समूह बी: फिनल्यान्डविरुद्ध रसिया (राति ६:४५ बजे/सेन्ट पिटर्सवर्ग)
१४. समूह बी: टर्कीविरुद्ध वेल्स (राति ९:४५ बजे/बाकु)
१५. समूह ए: इटालीविरुद्ध स्वीट्जरल्यान्ड (राति १२:४५ बजे/रोम)
बिहीबार १७ जुन (असार ३ गते)
१६. समूह सी: युक्रेनविरुद्ध नर्थ मेसेडोनिया (राति ६:४५ बजे/बुकारेस्ट)
१७. समूह बी: डेनमार्कविरुद्ध बेल्जियम (राति ९:४५ बजे/कोपेनहेगन)
१८. समूह सी: नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध अष्ट्रिया (राति १२:४५ बजे/आम्स्टरडम)
शुक्रबार १८ जुन (असार ४ गते)
१९. समूह ई: स्वीडेनविरुद्ध स्लोभाकिया (राति ६:४५ बजे/सेन्ट पिटर्सवर्ग)
२०. समूह डी: क्रोएसियाविरुद्ध चेक रिपब्लिक (राति ९:४५ बजे/ग्लास्गो)
२१. समूह डी: इंग्ल्यान्डविरुद्ध स्कटल्यान्ड (राति १२:४५ बजे/लन्डन)
शनिबार १९ जुन (असार ५ गते)
२२. समूह एफ: हंगेरीविरुद्ध फ्रान्स (राति ६:४५ बजे/बुडापेस्ट)
२३. समूह एफ: पोर्चुगलविरुद्ध जर्मनी (राति ९:४५ बजे/म्युनिख)
२४. समूह ई: स्पेनविरुद्ध पोल्यान्ड (राति १२:४५ बजे/सेभिया)
आइतबार २० जुन (असार ६ गते)
२५. समूह ए: इटालीविरुद्ध वेल्स (राति ९:४५ बजे/रोम)
२६. समूह ए: स्वीट्जरल्यान्डविरुद्ध टर्की (राति ९:४५ बजे/बाकु)
सोमबार २१ जुन (असार ७ गते)
२७. समूह सी’: नर्थ मेसेडोनियाविरुद्ध नेदरल्यान्ड्स (राति ९:४५ बजे/आम्स्टरडम)
२८. समूह सी: युक्रेनविरुद्ध अष्ट्रिया (राति ९:४५ बजे/बुकारेस्ट)
२९. समूह बी: रसियाविरुद्ध डेनमार्क (राति १२:४५ बजे/कोपेनहेगन)
३०. समूह बी: फिनल्यान्डविरुद्ध बेल्जियम (राति १२:४५ बजे/सेन्ट पिटर्सवर्ग)
मंगलबार २२ जुन (असार ८ गते)
३१. समूह डी: चेक रिपब्लिकविरुद्ध इंग्ल्यान्ड (राति १२:४५ बजे/लन्डन
३२. समूह डी: क्रोएसियाविरुद्ध स्कटल्यान्ड (राति १२:४५ बजे/ग्लास्गो)
बुधबार २३ जुन (असार ९ गते)
३३. समूह ई: स्लोभाकियाविरुद्ध स्पेन (राति ९:४५ बजे/सेभिया)
३४. समूह ई: स्वीडेनविरुद्ध पोल्यान्ड (राति ९:४५ बजे/सेन्ट पिटर्सवर्ग
३५. समूह एफ: जर्मनीविरुद्ध हंगेरी (राति १२:४५ बजे/म्युनिख)
३६. समूह एफ: पोर्चुगलविरुद्ध फ्रान्स (राति १२:४५ बजे/बुडापेस्ट)
रेस्ट डे २४ र २५ जुन (असार १० र ११ गते)
शनिबार २६ जुन (असार १२ गते)
३७. समूह ए को उपविजेता र समूह बी को उपविजेता (राति ९:४५ बजे/आम्स्टरडम)
३८. समूह ए को विजेता र समूह सी को उपविजेता (राति १२:४५ बजे/लन्डन)
आइतबार २७ जुन (असार १३ गते)
३९. समूह सी को विजेता र समूह डी/ ई/एफको तेस्रो हुने टोली (राति ९:४५ बजे/बुडापेस्ट)
४०. समूह बी को विजेता र समूह ए/डी/ई/एफको तेस्रो हुने टोली (राति १२:४५ बजे/सेभिया)
सोमबार २८ जुन (असार १४ गते)
४१. समूह डी को उपविजेता र समूह ई को उपविजेता (राति ९:४५ बजे/कोपेनहेगन)
४२. समूह एफको विजेता र समूह ए/बी/सीको तेस्रो हुने टोली (राति १२:४५ बजे/बुकारेस्ट)
मंगलबार २९ जुन (असार १५ गते)
४३. समूह डी को विजेता र समूह एफ को उपविजेता (राति ९:४५ बजे/लन्डन)
४४. समूह ई को विजेता र समूह ए/बी/ सी/डीको तेस्रो हुने टोली (राति १२:४५ बजे/ग्लास्गो)
रेस्ट डे ३० र १ जुलाई (असार १६ र १७ गते)
शुक्रबार २ जुलाई (असार १८ गते)
४५. खेल नम्वर ४२ को विजेता र खेल नम्वर ४१ को विजेता (राति ९:४५ बजे/सेन्ट पिटर्सवर्ग)
४६. खेल नम्वर ३९ को विजेता र खेल नम्वर ३७ को विजेता (राति १२:४५ बजे/म्युनिख)
शनिबार ३ जुलाई (असार १९ गते)
४७. खेल नम्वर ४० को विजेता र खेल नम्वर ३८ को विजेता (राति ९:४५ बजे/बाकु)
४८. खेल नम्वर ४४ को विजेता र खेल नम्वर ४३ को विजेता (राति १२:४५ बजे/रोम)
रेस्ट डे ४ र ५ जुलाई (असार २० र २१ गते)
मंगलबार ६ जुलाई (असार २२ गते)
४९. खेल नम्वर ४६ को विजेता र खेल नम्वर ४५ को विजेता (राति १२:४५ बजे लन्डन)
मंगलबार ७ जुलाई (असार २३ गते)
५०. खेल नम्वर ४८ को विजेता र खेल नम्वर ४७ को विजेता (राति १२:४५ बजे लन्डन)
रेस्ट डे ८, ९ र १० जुलाई (असार २४, २५ र २६)
आइतबार ११ जुलाई (असार २७ गते)
५१. खेल नम्वर ४९ र खेल नम्वर ५० को विजेता (राति १२:४५ बजे/लन्डन) सेमिफाइनल १ र २ को विजेता
Posted bynepalgovin May 24, 2021 Posted inUncategorizedLeaveacomment on युरोकप २०२० : खेलतालिका (नेपाली समय अनुसार)
६ जेठ, काठमाडौं
४ जेठमा मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीले मंगलबार राष्ट्रिय फुटबल टिमको घोषणा गर्दा टिममा ठूलै उथलपुथल भएको छ । यही जेठ महिनामा हुने इराकसंको मैत्रीपूर्ण खेल अनी विश्वकप छनोट अन्तर्गतको ३ खेलका लागि उनले २३ सदस्यीय टोली घोषणा गरेका हुन् ।
जसमा ६ खेलाडीले पहिलो पटक सिनियर टिममा स्थान बनाएका छन् । जसमा ५ खेलाडी पहिलो पटक मात्रै सिनियर टिमको क्लोज क्याम्पमा परेका थिए । यस्तै ७ खेलाडीले टिममा पुनरागमन गर्दा गत चैतमा थ्री नेशन्स कप जित्दाको टिममा रहेका १० खेलाडी मात्र अहिले टिममा छन् ।
बैशाख ११-जेठ १ सम्म भएको पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल नेपाल सुपर लिगमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा अलमुताइरीले युवा खेलाडीहरुलाई अवसर दिँदा नाम चलेका खेलाडीहरु भने टिमबाट बाहिरिए ।
यसअघि क्लोज क्याम्पका लागि ३२ जनाको नाम घोषणा गर्दा प्रशिक्षकले विकेश कुथु लगायत ८ खेलाडीलाई टिममा राखेका थिएनन् । त्यसैबाट २३ जनाको नाम घोषणा भएको हो ।
राष्ट्रिय टिमको कप्तानी गरिसकेका भरत खवास देखि रन्जित धिमालसम्मका खेलाडीहरु टिममा पर्न असफल रहे ।
एनएसएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका युवा खेलाडीहरु विशाल सुनार, गौतम श्रेष्ठ, कमल थापा, आयुष घलान, सुरज जेउ ठकुरी र मनिस डाँगी पहिलो पटक सिनियर टिममा परेका हुन् ।
एनएसएलमा गौतम आयुष र कमलले पोखरा थण्डर्सबाट खेलेका थिए भने सुरज र मनिसले विराटनगर सिटी एफसीबाट खेलेका थिए । विशालले एफसी चितवनका लागि खेलेका थिए ।
थ्री नेशन्स कपमा टिममा पर्न असफल रहेका नवयुग श्रेष्ठ, सन्तोष तामाङ, पुजन उपरकोटी, विकास खवास, सुमन अर्यालले टिममा स्थान बनाएका छन् । यस्तै सुमन लामा र आशिष लामाले पनि पुनरागमन गरेका छन् ।
सुमन अर्यालले एनएसएल नखेलेपनि टिममा स्थान बनाए । विकास खवासले एनएसएलको एक खेलेका थिए र पछि घाइते भएपछि उनी बाहिरिएका थिए ।
सुजल श्रेष्ठ, तेज तामाङ, रविशंकर पासवान, भरत खवास जस्ता राष्ट्रिय टिममा नियमित खेलाडी टिममा पर्न नसक्दा कमल, आयुष, सुरज र मनिसले अवसर पाएका हुन् ।
बिशाल सुनार (गोलकिपर)
नेपालका लागि उमेर समूहमा खेलिसकेका खेलाडी हुन् विशाल सुनार । उनले यू१६ र यू१८ राष्ट्रिय टिमको प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् । थ्री नेशन्स कपको लागि उनी बन्द प्रशिक्षणमा परेपनि अन्तिम टिममा पर्न असफल रहेका थिए ।
एनएसएलअघिको राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा परेकोले उनी ए क्याटेगोरीमा रहँदै २ लाखमा एफसी चितवनमा अनुबन्ध भएका थिए । जहाँ उनले ५ खेल खेले । तर पाँचौ खेलमा पोखरा थण्डर्स विरुद्ध उनी रातो कार्ड पाउदै मैदान बाहिरिएका थिए । उनले पहिलो खेलमै ललितपुरका कप्तान अन्जन विष्टको पेनाल्टी सेभ गरेका थिए । उक्त खेलमा विशालले उत्कृष्ट बचाउ गरेका थिए ।
पछिल्लो पटक ए डिभिजन लिग हुँदा उनले ब्रिगेड ब्वाइज क्लबबाट खेलेका थिए । यस्तै पोखरामा भएको आहा रार गोल्डकपमा उनले मनाङ मर्स्याङ्दीबाट खेलेका थिए ।
राष्ट्रिय टिमका नियमित सदस्य तथा एनएसएल च्याम्पियन टिम काठमाडौं रेजर्सका कप्तान तथा मार्की खेलाडी विकेश कुथु क्लोज क्याम्पमे पर्न असफल हुँदा विशालले पहिलो पटक सिनियर टिममा स्थान बनाए ।
गौतम श्रेष्ठ (डिफेन्डर)
गौतम श्रेष्ठले एनएसएलमा पोखरा थण्डर्सबाट खेलेका थिए । पछिल्लो पटक जावलाखेल युथ क्लबबाट ए डिभिजन लिग खेलेका उनले एएफसी कप छनोटमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबबाट खेलेका थिए । यस्तै कीर्गिस्तानको यू२३ टिम विरुद्ध मैत्रीपूर्ण खेल समेत खेलेका थिए ।
एनएसएलमा उनले पोखरका लागि ६ मध्ये ४ खेल खेले भने तीन खेलमा पूरा समय मैदान बिताए । एनएसएलअघि नै अलमुताइरीले ३२ जना छनोट गर्दा उनी क्याम्पमा परेका थिए । पोखराका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि उनी क्याम्पमा पर्दै अन्तिम टिममा पर्न सफल भए ।
राष्ट्रिय टिमका नियमित सदस्य रन्जित घिमाल र अनी थ्री नेशन्समार्फत डेब्यु गरेका निशान खड्का टिममा नपर्दा गौतमले टिममा स्थान बनाए ।
कमल थापा (मिडफिल्डर)
उमेर समूहमा खेलिसकेका कमलले एनएसएलमा पोखरा थण्डर्सबाटै खेलेका थिए । भिषोण गुरुङको स्थानमा टिममा स्थान बनाएका उनले लगका पछिल्ला ३ खेल मात्र खेल्ने अवसर पाए । वैकल्पिक खेलाडीको रुपमा केही समय मात्र मैदानमा बिताएपनि उनले प्रशिक्षक अलमुताइरीलाई प्रभावित गरे ।
घरेलु फुटबलमा हिमालयन शेर्पाबाट ए डिभिजन लिग खेलेका उनी मिडफिल्डमा छरिता छन् ।
एन्फा एकेडेमीका उत्पादन कमल विमल घर्ती मगर, अनन्त तामाङ, अन्जन विष्टको ब्याचका खेलाडी समेत हुन् ।
आयुष घलान (मिडफिल्डर)
नेपाल सुपर लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने युवा खेलाडी हुन आयुष घलान् । सुपर लिग अघि ३रेलु पुटबलमा बिरलै नाम सुनिएका आयुषले एनएसएलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सबैको मन जिते ।
उनले यसै सिजन बि डिभिजन लिगमा खुमलटारबाट खेलेका थिए । छोटो समयै उनी राष्ट्रिय टिमा पर्न सफल भएका हुन् । उनी हिडन ट्यालेन्टको रुपमा पोखरामा अनुबन्ध भएका थिए ।
एनएसएलमा पहिलो खेलमा वैकल्पिक खेलाडीको रुपमा ६ मिनेटमात्र खेलेका उनले त्यसपछि पाँच लिग खेलमा पहिलो रोजाईँमा रहँदै खेलेका थिए ।
एनएसएलकै क्रममा उनी प्रशिक्षक अलमुताइरीको रोजाईँमा परेका थिए ।
सुरज जिउ ठकुरी (मिडफिल्डर)
एनएसएलमा विराटनगर सिटी एफसीमा यस पटक नाम चलेका उत्कृष्ट खेलाडीहरु थिए । तर सुजर जेउ ठकुरीले अवसर पाउँदा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै सबैको मन जिते । सुरुवाती खेलमा वैकल्पिक खेलाडीको रुपमा मैदान प्रवेश गरेका उनले पछिल्ला तीन खेल पहिलो रोजाईँमा रहँदै पूरै समय मैदानमा बिताए ।
उनले जावालखेल युथ क्लबबाट ए डिभिजन लिग खेलेका थिए । यान ल प्रशिक्षक रहेको विराटनगर सिटीका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि उनी राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा पर्न सफल भएर पहिलो पटकमै राष्ट्रिय टिममा समेत परे ।
मिनस डाँगीले पनि एनएसएलमा विराटनगर सिटीबाटै खेले । दक्षिण कोरियामा खेल्दै चर्चा कमाएका उनले यसअघि सी डिभिजन लिग खेलेका थिए भने नेपालमा भएको साफ यू१८ च्याम्पियन समेत खेलेका थिए । विराटनगरले उनलाई हिडन ट्यालेन्टको रुपमा टिममा अनुबन्ध गरेको थियो र उनले मैदानमा पनि त्यही खालको प्रदर्शन देखाए ।
उनले एनएसएलमा विराटनगरका लागि लिगका सबै ६ खेलमा वैक्लपिक खेलाडीको रुपमा मैदान प्रवेश गर्दै खेलेका थिए । पहिलो रोजाईँमा पर्न नसकेपनि उनले अवसर पाउँदा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए ।
उनी अट्याकमा जुनसुकै पोजिसनमा समेत खेल्छन् भने बढी जसो विंगरको भूमिकामा खेल्छन् ।
उनले यसअघि खालीबारी फुटबल क्लबका लागि सी डिभिजन लिग खेलेका थिए र त्यहीबाट उनको चर्चा बढेको थियो । दक्षिण कोरियामा बस्दै आएका उनी नेपालमा नागरिकता बनाउन आएका बेला सी डिभिजन लिग खेलेका थिए ।
Posted bynepalgovin May 20, 2021 May 20, 2021 Posted inUncategorizedLeaveacomment on यी हुन् पहिलो पटक राष्ट्रिय फुटबल टिममा परेका ६ खेलाडी
इराक एसियन कपको उपाधि जितिसकेको टिम हो । नेपालले अहिलेसम्म एसियन कप समेत खेल्न सकेको छैद्द । फिफा वरीयतामा पनि इराक नेपाल भन्दा एक सय भन्दा धेरै स्थानले माथि छ ।
दुवै टोली अहिले कतारमा हुने २०२२ को फिफा विश्वकप र चीनमा हुने २०२३ को एएफसी एसियन कपको संयुक्त छनोटको दोस्रो चरण खेलिरहेका छन् । छनोटका बाँकी खेलहरु जुन १५ सम्ममा सकाउनु पर्नेछ । नेपाल र इराक दुवैले छनोटमा समान ३ खेल खेल्न बाँकी छ ।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै इराकले नेपालसंग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्नका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । छनोटमा इराकले कम्बोडिया, हङकङ र बहराइन जस्ता टिमसंग खेल्न बाँकी छ । त्यसमा अभ्यस्त हुनका लागि इराकले नेपालसंग खेल्न चाहेको हो । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बिहीबार इराकसंग खेल्ने पुष्टी गरेपछि अबको एक महिनापछि अर्थात जेठ १५ गते (मे २९) मा नेपालले वरीयतामा आफूभन्दा १०३ स्थान माथि रहेको इराकसंग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ ।
नेपालको लागि पनि विश्वकप छनोटको लागि यो तयारी हुनेछ । नेपालले समूह बी मा चाइनिज ताइपेई, अष्ट्रेलिया र जोर्डनसंग खेल्न बाँकी छ । यसअघिका पाँच खेलमा नेपालले एक मात्र मात्र जितेको छ । अन्जन विष्टको दुई गोल मद्दतमा नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई उसैको मैदानमा २-० ले पराजित गरेको थियो ।
कोभिड-१९ को प्रभावका कारण एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले एसियाली क्षेत्रका छनोटका खेलहरु न्युट्रल भेन्युमा गर्दैछ र नेपाल रहेको समूहका खेलहरु कुवेतमा हुने तय गरिएको छ । संयोगवस नेपालका नयाँ विदेशी प्रशिक्षक पनि कुवेतकै छन् । इराकसंगको खेल उनै अब्दुल्लाह अलमुताइरीका लागि नेपालको प्रशिक्षकको रुपमा पहिलो खेल हुनेछ ।
नेपालले सन् २००७ को एसियन कप च्याम्पियन इराकसंग खेल्न लागेको २० वर्षपछि पहिलो पटक हो । पछिल्लो पटक नेपालले सन् २००२ को विश्वकपको छनोट अन्तर्गत इराकसंग दुई खेल खेलेको थियो । दुवै खेलमा नेपालको पक्षमा नतिजा आउन सकेन । दुई खेलमा इराकले कूल १३ गोल गर्दा नेपालले ३ गोल फर्काएको थियो ।
सन् १९८२ मा भएको एसियन गेम्समा नेपालले पहिलो पटक इराकसंग खेलेको थियो । जहाँ नेपाल ३-० ले पराजित भएको थियो । त्यही एसियन गेम्समा समूहको पहिलो खेलमा नेपाले कुवेतसंग खेलेको थियो र ३-१ ले पराजित भएको थियो । नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल वाइबी घलेले त्यही खेलमा गरेका थिए ।
त्यसको १९ वर्षपछि नेपालले सन् २००१ मा विश्वकप छनोटमा इराकसंग दुई खेल खेलेको थियो । समूह चरणको दुवै खेलमा नेपाल पराजित भयो । पहिलो खेलमा नेपाल इराकसंग ९-१ ले पराजित भएको थियो त्यस खेलमा नेपालका लागि निराजन रायमाझीले एक मात्र गोल गरेका थिए ।
दोस्रो खेलमा नेपालले गोलअन्तर घटायो भने एक गोल बढी गर्‍यो । दोस्रो खेलमा नेपाल इराकसंग ४-२ ले पराजित हुँदा निराजन संगै हरि खड्काले पनि गोल गरे । त्यतिबेला हरिले इराक विरुद्ध गरेको गोल उत्कृष्ट थियो । त्यो गोललाई हरीले समेत विशेष र उत्कृष्ट गोल मानेका छन् । त्यसबेला हरिको गोललाई कमेन्टेटरले ‘इन्टेलिजेन्ट’को संज्ञा दिएको उनले सुनाएका थिए ।
निराज र हरि अहिले पनि नेपालका लागि सर्वाधिक गोल गर्नेमा संयुक्त रुपमा शीर्ष स्थानमा छन् । दुवैले समान १३ गोल गरेका छन् ।
नेपाल भर्सेस इराक
खेल : ३
इराक विजयी : ३
नेपाल विजयी : ०
इराकले गरेको गोल : १६
नेपालले गरेको गोल : ३
Posted bynepalgovin April 29, 2021 April 29, 2021 Posted inUncategorizedLeaveacomment on २० वर्षपछि इराकसंग फुटबल खेल्दै नेपाल
१७ फागुन, काठमाडौं
इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल)को १३औ सिजन पूरै बेन्चमा । अष्ट्रेलियन बिस लिगको १०औं संस्करणमा नयाँ टिम होबार्ट हुरिकेन्सबाट ठिकठाकैको प्रदर्शन । अनी आइपीएलकै १४औं संस्करणको लागि मिनि अक्सनमा अनसोल्ड ।
विश्वभर फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिग खेल्नै ग्लोबल स्टारको छवी निर्माण गरिसकेका नेपाली युवा लेगस्पीनर सन्दीप लामिछानेको लागि पछिल्लो समय त्यति सुखद हुन सकेन ।
नेपालले मार्चमा खेल्ने तया भएको विश्वकप लिग २ अन्तर्गत ओमान हुने ट्राई सिरिज अनिश्चित कालका लागि स्थगित हुनु अनी त्यसेका लागि नेपालमा भइरहेको क्रिकेट ट्रेनिङ पनि स्थगित हुनु । सन्दीपका लागि राष्ट्रिय टिमबाट तत्काल खेल्ने पनि कुनै खेल नहुनु ।
निरन्तर खेलिरहेका सन्दीपका लागि तत्काल खेल्न नपाउनु एक चिन्ता होला तर अर्कोतिर नेपाली क्रिकेट फ्यान पनि सन्दीपको लागि लिएर चिन्तित थिए । विशेषगरी आइपीएलमा अनसोल्ड हुँदा नेपालीहरु दु:खी बने ।
तर सन्दीपले यसलाई सहज लिएर फ्यानले देखाएको समर्थनलाई उनीहरुको माया स्वरुप ग्रहण गरे ।
यसेबीच पनि आगामी जुलाईमा इंग्ल्याण्डमा हुने नयाँ फर्म्याटको ‘दी हन्ड्रेड’ क्रिकेट प्रतियोगितामा ओभल इन्भिन्सिभ्लसमा रिटेन हुनु सन्दीप र नेपाली फ्यानको लागि खुशीको विषय बनेर आयो । जहाँ सन्दीप करिब डेढ करोड नेपाली रकमम अनुबन्ध भएका छन् । गत सिजन नै दी हन्ड्रेड प्रतियोगिता तय भएपनि कोरोना महामारीले गर्दा रोकिएको थियो।
२० वर्षीय लेगस्पीनर सन्दीले दी हन्ड्रेड नयाँ फर्म्याटको क्रिकेट भएको र यसमा खेल्न आफू उत्साहित भएको बताएका छन् ।
अर्कोतिर सन्दीप आइपीएलमा अनसोल्ड हुनुअघि पाकिस्तान सुपर लिग पीएसएलमा पनि अनसोल्ड भएका थिए । महँगा रकमसहित प्लाटिनम क्याटेगोरीमा आफूलाई राखेपनि त्यहाँ कुनै पनि टिमले सन्दीपलाई अनुबन्ध गरेनन् ।
तर समय सधैँ एक हुँदैन । समयसंगै सबै विषयमा परिवर्तन हुँदै जान्छ । ड्राफ्टबाट छनोट हुन असफल भएपनि सन्दीपले अहिले पाकिस्तानमा भइरहेको पीएसको छैटौं संस्करणमा खेल्ने अवसर पाएका छन् ।
सन्दीपले सन् २०१९ मा लाहोर कलन्दर्सबाट पहिलो पटक पीएसएल खेलेका थिए । २०२० मा उनी छनोट भएनन् ।
यस पटक भने सन्दीप रिप्लेसमेन्ट प्लेअरको रुपमा पीएसएलमा अनुबन्ध भएका छन् । सन्दीपले फेरि लाहोर कलन्दर्सबाटै पिएसएल खेल्ने भएका हुन् ।
र सन्दीपले प्रतिस्पर्धा गरेका खेलाडी विश्व चर्चित अर्का स्पीनर रासिद खान हुन् । यस पटक लाहोरले रासिदलाई ड्राफ्टबाट छनोट गरेको थियो । तर रासिद सुरुवाती दुई खेल्दै लाहोर टिम छाडे ।
अफगानिस्तानको राष्ट्रिय टिमबाट खेल्न उनले लाहोर टिम छाडे । त्यही रिक्त स्थानमा सन्दीपले अवसर पाएका हुन् ।
त्यसका लागि सन्दीप शनिवारै नेपालबाट दोहा हुँदै पाकिस्तानको कराँची प्रस्थान गरेका छन् । पीएसएस भइरहेकव स्थान कराँची शहरमा सन्दीपले आफ्नो टिमलाई भेट्नेछन् ।
पीएसएसको वेवसाइटमा शनिवारै सन्दीपले रासिदको स्थानमा खेल्ने जनाएको छ । रासिखदे क्वेट्टा ग्लाडिएटर्स र पेशावर जाल्मी विरुद्ध खेलेका थिए । उक्त खेल लाहोरले क्रमश: ४ विकेट र ९ विकेटले जितेको थियो ।
पीएसएलले सन्दीप सिजनको बाँकी समयभरका लागि उपलब्ध हुने पनि जनाएको छ ।
सन्दीप, रासिद र शदाब खानले सन् २०१६ मा बंगलादेशमा भएको आइसीसी यू१९ विश्वकप खेलेका थिए । यी सबै खेलाडीले त्यहीबाँट राष्ट्रिय टिमसम्म पुग्नेबाटो बनाए र स्टार भए । तीन जना स्पीनर हुन् । सन्दीप र रासदि विश्व चर्तित स्पीनरको रुपमा छन् । शदाब पाकिस्तान राष्ट्रिय टिमको उपकप्तान छन् । रासिदले अफगानिस्तानको राष्ट्रिय टिमको कप्तानी गरिसके । २२ वर्षीय शदाब अहिले पीएसएलमा इस्लामाबाद युनाइटेडको कप्तानी गरिरहेका छन् । सन्दीपले पनि नेपालमा फ्रेन्चाइज लिगको कप्तानी गरिसकेका छन् ।
सन्दीपले राष्ट्रिय टिमको कप्तानी गर्ने अवसर आए त्यसका लागि आफू तयार रहेको सम्मान समेत हुने बताएका छन् ।
फेब्रुअरी २२ देखि शुरु भएको पीएसलको छैटौं संस्करण मार्च २२ सम्म सञ्चालन हुनेछ । लाहोरले लिग चरणमा अझे ७ खेल खेल्न बाँकी छ । प्लेअफ पुगेमा सन्दीपले अझै थप खेल खेल्ने अवसर हुनेछ ।
नेपालमा खेल्न जुरेन
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय खेल स्थगित भएपछि क्यानले यही फागुनमा मेयर कप एकदिवसीय क्रिकेट आयोजना गर्दैछ । काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा यही फागुन २२ देखि २९ गतेसम्म टीयू मैदान र मुलपानी मैदानमा मेयर कप हुनेछ । जसमा माघमा भएको प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय प्रतियोगिताको सेमिफाइनल पुगेका चार टिम र महानगरपालिकाको एक टिमसहित पाँच टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री कप हुँदा सन्दीप अष्ट्रेलियामा बिग बास लिग खेलेर फर्केका थिए । सन्दीपले प्रधानमन्त्री कप खेलेनन् । यसअघिका संस्करणमा पनि सन्दीप कतै न कतै व्यस्त हुँदा घरेलु राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने अवसर जुरेन ।
यस पटक फ्रेन्चाइज लिग र राष्ट्रिय टिमको खेल नहुँदा सन्दीपले मेयर कप खेल्ने सम्भावना बढेको थियो ।
२०१८ डिसेम्बरमा एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपीएल) खेलेयता सन्दीपले घरेलु प्रतियोगिता खेलेका छैनन् । त्यसैले सन्दीप आफैँ पनि नेपालमै डोमेस्टिक प्रतियोगिता खेल्न उत्सहित थिए ।
टीयू मैदानमा सन्दीपको गुग्ली हेर्न दर्शक तयार थिए । तर लाहोरको भिसा लाग्दै सन्दीप कराची उडेपछि तत्कालका लागि उनले नेपालमा राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने सम्भावना टरेको छ ।
केही समयअघि सन्दीपलाई नेपालको घरेलु प्रतियोगिता खेलेको कहिले हेर्न पाइन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले बाहिर खेल नपरे हेर्न पाइन्छ भनेका थिए । यस पटक त्यो सम्भावना थियो तर बाहिर खेल्ने अवसर सन्दीपले पाए अनी उडे कराची ।
Posted bynepalgovin February 28, 2021 April 29, 2021 Posted inUncategorizedLeaveacomment on रासिद खान नेशनल ड्युटीमा जाँदा सन्दीपलाई अवसर
८ फागुन काठमाडौं ।
१२ खेल १२ वटैमा जित । ७७ गोल गरेको । १ गोल खाएको । अनी अपराजित च्याम्पियन । विभागीय टोली एपीएफले राष्ट्रिय महिला लिग उपाधि जित्दाको उपलब्धी हो यो । ७ टिम सहभागि लिगमा एपीएफले १२ खेल जित्दै ७७ गोल गरेको एपीएफले जम्मा १ गोल मात्र खायो ।
राष्ट्रिय टिमका अधिकांश खेलाडी रहेको एपीएफले नगरपालिकाको टिमहरुलाई सहजै पराजित गर्‍यो । केही खेलमा एपीएफले गोलको वर्षा गर्‍यो । विभागीय टिम विरुद्ध भने एपीएफले संघर्ष गर्नुपरेको थियो । तर डबल लिगमा एपीएफले आर्मी र पुलिसलाई दुवै खेलमा हरायो ।
आर्मीलाई पहिलो चरणमा २-० ले पराजित गरेको एपीएफले अन्तिम खेलमा आर्मीलाई ३-० ले हरायो । यस्तै पुलिसलाई पहिलो चरणमा ३-० र दोस्रो चरणमा २-१ ले हरायो । पुलिस विरुद्ध व्यहोरेको गोल नै एपीएफले लिगमा खाएको एक मात्र गोल हो । पुलिसकी अमृता जैसीले एपीएफ विरुद्ध गोल गरेकी थिइन् ।
एपीएफले अन्य ११ खेलमा गोल खाएन ।
अन्तिम खेलमा आर्मीलाई ३-० ले हराउदै च्याम्पियन बनेपछि एपीएफका खेलाडी, प्रशिक्षक, पदाधिकारी सबै उत्साहित थिए । दुई खेलअघि नै च्याम्पियन बनेपछि विभागीय टोलीलाई नै अन्तिम खेलमा हराएर उपाधि जित्दा एपीएफको शान छुट्टै थियो ।
एपीएफलाई अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनाउने टिमकी कप्तान अनिता बस्नेतले यसको खुशी व्यक्त गर्ने शब्द नै नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘अब यसलाई कसरी व्यक्त गर्ने म संग शब्द नै हैन ।’ आर्मीलाई हराएपछि उनले भनिन् । ‘हामीले १२ खेल जित्दै उपाधि जित्यौँ । त्यसमा खुशी छौँ तर महत्वपूर्ण खेलाडी साम्बा घाइते हुनु हाम्रो लागि दुखद भयो । हामीले हरेक क्षण साम्बाकै लागि प्रे गरिराथ्यौँ ।’
पहिलो पटक टिमलाई लिड गर्दै उपाधि जिताएकी अनिताले योजना अनुसार नै सबै खेल जितेको तर एउटा चाहना पूरा हुन नसकेको बताइन् । ‘हामीले योजना अनुसार नै लिग जित्यौँ । अझ हामीले लिगमा एक गोल नखाई लिग च्याम्पियन बनेर इतिहास रच्न हामी सबैको योजना थियो । त्यो चाँही पूरा हुन सकेन । पुलिस विरुद्ध गोल खायौँ । हाम्रो लक्ष्य जसरी पनि सबै खेल जितेर लिग जित्ने नै थियो ।’
दुई खेल अघि नै लिग उपाधि पक्का गरिसकेपनि अन्तिम खेलमा आर्मीलाई पराजित गर्दै उपाधि जित्नुको मज्जा बेग्लै भएको अनिताले सुनाइन् । ‘आर्मीलाई हराएर जित्दा छुट्टै आनन्द छ । हामीले सोचेको नै भाइटल म्याच नै फेस गर्न चाहन्थ्यौ । सजिलो टिमसंग खेल्दा हामीलाई खासै केही थिएन । किनभने भाइटल म्याचमै जितेर ट्रफी उचालेको छुट्टै आनन्द हुन्छ ।’
यस्तै उनले अन्तिम खेल हार्नु भन्दा जितेर नै ट्रफी उचाल्नु मज्जा भएको बताइन् । ‘च्याम्पियन भइसकेपछि म्याच जित्दा अर्को खुशी हुन्छ । विनर हामी अलरेडी भइसकेका थियौँ । च्याम्पियन त बनिसकेका थियौँ तर पनि हामीले मैदान भित्र जितेर ट्रफी उचालेको र हारेर उचालेको त निश्चय नै फरक पर्छ नि ।’ अनिताले खुशी हुँदै भनिन् । ‘त्यही भएर हामी जसरी पनि आर्मीलाई जित्नैपर्छ भन्ने सोचेका थियौँ त्यो खुशी छुट्टै हुन्छ । मैले खेलाडीहरुलाई पनि त्यही भनेको थिएँ । हारेर ट्रफी उचालेको खासै मजा हुँदैन ।’
एपीएफले लगातार तेस्रो पटक उपाधि जित्दै लिग उपाधिमा ह्याट्रिक गरेको हो । यसअघि छोटो लिग हुँदा भन्दा अहिले लामो समय लिग हुँदा फरक भएको उनले बताइन् । ‘हामीले लगातार तेस्रो पटक लिग उपाधि जित्यौँ । पहिला र अहिले धेरै फरक भएको छ । पहिला १० देखि १५ दिनमा लिग सकाउँनुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले एक महिना लिग भयो । विदेशी खेलाडीसंग पनि खेल्न पायौँ । यसरी लिग जित्यौँ रमाइलो भयो । पहिलाको भन्दा अहिले धेरै खेल थिए । अहिले फरक छ ।’
आफ्नो नेतृत्वमा एपीएफलाई अपराजित च्याम्पियन बनाएपछि अनिताले व्यक्त गरेको धारणा संक्षिप्तमा
हामीले १२ खेलमा १२ वटै खेल जितेर च्याम्पियन बन्यौँ । अहिले म यसमा के भन्ने सोच्नै सक्दिन । शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिन । किनभने हामीले महत्वपूर्ण खेलाडी गुमाएको थियौँ । च्याम्पियन बनिसकेका थियौँ तर अन्तिम खेल कसरी जित्ने भन्ने कुरा थियो । हाम्रो मुख्य खेलाडी साम्बा हो । साम्बालाई मुटु मान्छु म । उसले गोल मात्र होइन असिस्ट समेत गरिरहेको छ । त्यही भएर मैले धेरै मिस गरे । त्यसको बावजुत पनि साम्बा बिना हामी पनि खेल जित्यौँ । हामीले हरेक क्षण साम्बाका लागि ‘प्रे’ गरिराथ्यौँ ।
मेरो नेतृत्वम जिताउँदा एकदम खुशी भएँ । चोटका कारण खेलाडीलाई गुमाउँदा चाँही खुशी हुन सकेनौँ । साम्बा एक वर्ष बाहिर बस्नुपर्छ । साम्बा बिना लिड गर्‍यौँ सिनियर दिदीहरु हुनुहुन्छ । जुनियरलाई लिड गरे । अब टिममा लिड गर्न गाह्रो नै हुन्छ । जुनियर पनि छन् उनीहरुलाई मिलाउनुपर्छ ।
हामीले योजना अनुसार नै लिग जित्यौँ । अझ हामीले लिगमा एक गोल नखाई लिग च्याम्पियन बनेर इतिहास रच्न हामी सबैको योजना थियो । त्यो चाँही पूरा हुन सकेन । पुलिस विरुद्ध गोल खायौँ । हाम्रो लक्ष्य जसरी पनि सबै खेल जितेर लिग जित्ने नै थियो ।
पहिलो म्याच देखि नै अन्तिम म्याच सम्म हामीले जित्यौँ जसरी पनि खेल जित्नैपर्छ भनेर नै लाग्यौँ र निरन्तर दियौँ ।
आर्मीलाई हराएर जित्दा छुट्टै आनन्द छ । हामीले सोचेको नै भाइटल म्याच नै फेस गर्न चाहन्थ्यौ । सजिलो टिमसंग खेल्दा हामीलाई खासै केही थिएन । किनभने भाइटल म्याचमै जितेर ट्रफी उचालेको छुट्टै आनन्द हुन्छ ।
च्याम्पियन भइसकेपछि म्याच जित्दा अर्को खुशी हुन्छ । विनर हामी अलरेडी भइसकेका थियौँ । च्याम्पियन त बनिसकेका थियौँ तर पनि हामीले मैदान भित्र जितेर ट्रफी उचालेको र हारेर उचालेको त निश्चय नै फरक पर्छ नि ।
त्यही भएर हामी जसरी पनि आर्मीलाई जित्नैपर्छ भन्ने सोचेका थियौँ त्यो खुशी छुट्टै हुन्छ । मैले खेलाडीहरुलाई पनि त्यही भनेको थिएँ । हारेर ट्रफी उचालेको खासै मजा हुँदैन ।
साम्बा घाइते भएपछि टिममा मनोवैत्रानिक असर निश्चय नै पर्‍यो । मलाई त धेरै नै पिर परिराथ्यो मनमा । किनभने मैले अरुलाई पनि ह्यान्डल गर्नुपर्ने थियो । हामीलाई धेरै च्यालेन्ज थियो । मैले हामीले साम्बाकै लागि खेल्नुपर्छ है भनेको थिएँ । सबैजनाको एकरुपता थियो । बहिनीहरुको साथ थियो । त्यसैले हामी सफल भयौँ ।
मेरो प्रदर्शनमा म सन्तुष्ट छैन । मैले अझै धेरै गर्नुपर्ने थियो किनभने मैले अझै मिहिनेत गर्नुपर्छ । मैले जुन गेम खेले त्यसमा हेर्दा मैले अझै गर्नुपर्छ यतिले पुग्दैन ।
हामीले लगातार तेस्रो पटक लिग उपाधि जित्यौँ । पहिला र अहिले धेरै फरक भएको छ । पहिला १० देखि १५ दिनमा लिग सकाउँनुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले एक महिना लिग भयो । विदेशी खेलाडीसंग पनि खेल्न पायौँ । यसरी लिग जित्यौँ रमाइलो भयो । पहिलाको भन्दा अहिले धेरै खेल थिए । अहिले फरक छ ।
विदेशी खेलाडीहरुसंग खेल्दा हामी पनि अनुभव लिने हो । उहाँहरुको बल टच राम्रो थियो । हामीले पनि केही कुराहरु विदेशीबाट सिक्यौँ । शारीरिक रुपमा भन्ने हो भने खासै फरक भएन ।
अब तत्काल गेम छैन । हामीले निरन्तर गेम खेल्न पाए राम्रो हुन्छ । कोभिडले एक वर्ष खेल्न पाएन । अझ धेरै गेम भयो भयो भने हामीले खेल्न पाउँछौँ र नयाँ बहिनीहरु आउँदा उनीहरुले पनि खेल्न पाउँछ ।
लगडाउनले लामो समय बाहिर रहनुपर्छ लिगको सुरुको खेलहरुमा फिटनेसले गर्दा गाह्रो पनि भयो । हामीले सेल्फ ट्रेनिङ त गरिराथ्यौँ तर सेल्फ ट्रेनिङ र ग्रुप ट्रेनिङमा फरक पर्छ ।
यो लिगबाट प्रिति बहिनी राम्रो सम्भावना देखिएको खेलाडीको रुपमा देखिएको छ । सरु बहिनीले पनि धेरै राम्रो खेलिराछ । प्रितीले उमेर समूहमा खेलेको हो राष्ट्रिय टिममा छैन । हाम्रो टिममा उ नै मैले एकदम धेरै सम्भावना देखेको खेलाडी हो ।
अब लिग सकियो तत्काल खेल छैन । लास्ट टाइम म र साम्बाले भारतमा गएर खेलेका थियौँ । यो पटक पनि बाहिर खेल्ने योजना छ । गेम हुँदा साम्बालाई मैले जहिले पनि मिस गर्छु । लास्ट टाइम हामी संगै भारत गयौँ तर फरक टिमबाट खेल्यौँ । सेमिफाइनलमा म भएको टिम साम्बाकै टिमसंग हारेको थियो । उसलाई मिस गरिराको हुन्छु । अब यो गेमपछि म र अरु खेलाडीहरु पनि जान्छौँ होला । भारतमा खेल्न मेरो कुरा भइराछ कुन टिम हुन्छ अहिले भन्न सकिन्न ।
Posted bynepalgovin February 20, 2021 Posted inUncategorizedLeaveacomment on ‘एक गोल नखाई च्याम्पियन बन्ने लक्ष्य थियो’
१९ साउन काठमाडौं ।
२१७ रनको लक्ष्य। ४९ ओभरमा २११-९। जितका लागि अन्तिम ओभरमा रन ए बल आवश्यक। नेपाल बलिङ साइडमा थियो भने नेदरल्याण्ड्स ब्याटिङ साइड। ब्याटिङमा हुँदा नेपालले यस्तो खेल सँधै आफ्नो पक्षमा पारेको थियो।
नेपालको क्रिकेट इतिहासमै नेपाल ऐतिहासिक ओडिआई सिरिज खेलिरहेको थियो। पहिलो खेलमा ५५ रनले पराजित भएको नेपाल दोस्रो खेलमा जित हात पार्दै सिरिज बराबरी गर्ने दाउमा थियो।
त्यस अवस्थाबाट नेपाललाई १ रनको रोमाञ्चक जित दिलाउन क्याप्टेन कुल पारस खड्का अन्तिम ओभरमा नायक बने।
नेपालका मुख्य बलर सोमपाल कामी, सन्दीप लामिछाने र बसन्त रेग्मीको स्पेल सकिसकेको थियो। अर्का फास्टर बलर ‘डेब्युटान्ट ब्वाए” ललित भण्डारीले ४८ औँ ओभर बलिङ गरेका थिए। उनको ओभर अझै बाँकी थियो। यस्तै ४९औँ ओभर दीपेन्द्र सिंह ऐरीले गरे।
अन्तिम ओभरमा पारससँग धेरै विकल्प थिएन। कि ललितलाई बलिङ गराउनु कि नयाँ नयाँ बलर प्रयोग गर्नु। तर कप्तान पारस खड्का अन्तिम ओभर बलिङ गर्न आफैँ अगाडि बढे। र नेपाललाई पहिलो ओडिआई जित दिलाए। घरेलु समर्थकलाई निराश पारे। भिआरए ग्राउण्डममा उपस्थित २०० भन्दा बढी नेपाली त्यसको प्रत्यक्ष साक्षी बने। दर्शकले पनि नेपाली खेलाडीलाई भरपुर साथ दिए।
अन्तिम ओभरमा नेदरल्याण्ड्सलाई जितका लागि ६ रन चाहिएको थियो र क्रिजमा थिए फ्रेड क्लासेन र पउल भान मिकेरेन।
५०औँ ओभरको पहिलो बलमा पारसले क्लासेनलाई १ रन दिए। दोस्रो बलमा मिकेरेनले कुनै रन जोड्न सकेनन्। तेस्रो बलमा मिकेरेनले १ रन जोड्दै ३ बलमा ४ रन आवश्यक बनाए। रन जोड्दा डच खुशी हुन्थे भने डट बल फाल्दा नेपाली। चौथो बलमा क्लासेनले २ रन जोड्दा
नेदरल्याण्डलाई अन्तिम २ बलमा २ रन चाहिएको थियो। यस्तो अवस्थामा खेल नेपालको पक्षबाट लगभग गुमिसकेको थियो। तर त्यस्तो अवस्थामा पनि कप्तान पारसले संयमित भएर अन्तिम दुई बल बलिङ गरे। पाँचौ बलमा पारसले क्लासेनलाई रन दिएनन्। अब अन्तिम बलमा नेदरल्याण्सका लागि खेल जित्न २ रन चाहिएको थियो। १ रनले पनि खेल बराबरी हुने थियो। तर, पारसले अन्तिम बलमा पनि कुनै रन दिएनन् भने स्ट्राइकमा रहेका क्लासेनलाई नन- स्ट्राइक एण्डमा रनआउट गरे। त्यसपछि कप्तान पारस दौडेर अन्य खेलाडी सामु पुग्दै खुशीयाली मनाए।
यस्तो थियो अन्तिम ओभर:
यो जित नेपालको लागि ऐतिहासिक थियो। ओडिआईमा नेपालको पहिलो जित। पहिलो ओडिआई सिरिज नेपालले १-१ को बराबरी गर्दै आगामी ४ वर्षे ओडिआई यात्रामा सुखद सुरुवात समेत गरेको छ। १ रनको रोमाञ्चक जितपछि नेपाली खेलाडी र अफिसियल मात्र होइन नेपाल लगायत विश्वभर रहेका नेपालीहरु एकै पटक उत्साहित भए।
पारसले नेपालको पहिलो ओडिआई जितमा अर्धशतक बनाए भने बलिङमा निर्णायक प्रदर्शन गरे। पारस र सोमपालको अर्धशतक मद्दतमा नेपालले ४८.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर २१६ रन बनाएको थियो। नेपालको धर्मराएको इनिङ्स सम्हाल्न सोमपाल कामीले ५ चौका र ३ छक्का प्रहार गर्दै सर्वाधिक ६१ रन बनाए। ओडिआईमा त्यो नेपाली खेलाडीको उच्च स्कोर हो।
यस्तै बलिङमा सन्दीप लामिछानेले ३ तथा डेब्युटान्ट ललित भण्डारीले २ विकेट लिए। दोस्रो खेलमा १ रनको रोमाञ्चक जितपछि नेपालले ऐतिहासिक पहिलो ओडिआई सिरिज १-१ को बराबरीमा टुङ्गाएको छ।
जहाँ एसियाका टेष्ट खेल्ने पाँच राष्ट्र हुनेछन्। छनोटको विजेताले समूह चरणमा भारत र पाकिस्तानसँग खेल्ने अवसर समेत पाउनेछ।
(२०७५ साउन १९ गते पहिलोपोष्ट डट कम अनलाइनमा प्रकाशित सामाग्री)
Posted bynepalgovin August 3, 2020 Posted inUncategorizedLeaveacomment on १ रनको रोमाञ्चक जित दिलाउने पारस खड्काको त्यो अन्तिम ओभर, जुन नेपालको लागि सँधै यादगार रहनेछ
१९ बैशाख, काठमाडौं
उदाहरणको लागि देश भनेको राष्ट्रिय टिम अनी राजनीनिक पार्टी भनेको कुनै खेलकुद टिम अथवा क्लब । त्यसलाई हाँक्न वा नेतृत्व गर्न एक जना कप्तान लिडर चाहिन्छ । जसलाई सबैले मानेको होस् अनी उसले भनेको अरुले पनि सुनोस् ।
केही समयअघिसम्म अलराउण्डर पारस खड्का नेपालको राष्ट्रिय टिमका कप्तान थिए । उनी देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिनिधित्त गर्दा नेतृत्व गर्थे । यस्तै नेपालभित्रै राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु फेन्चाइज लिगहरु हुँदा उनी आफ्नो डोमेस्टिक टिमलाई पनि लिड गर्थे । एउटा कप्तान दुई खाले टिमको नेतृत्वमा हुन्थ्यो ।
भारतमा महेन्द्रसिंह धोनी केही वर्ष अघि सम्म राष्ट्रिय टिमका पनि कप्तान थिए चेन्नाई सुपर किंग्सका पनि ।
अहिले विराट कोही भारतीय टिमको कप्तान छन् अनी आइपीएलमा रोएल च्यालेन्जर्स बैंगलोरका कप्तान।
यस्तै फुटबलमा लिओनल मेसी अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टिमका कप्तान छन् क्लबमा भने उनी स्पानिस ला लिगा क्लब बार्सिलोनाका कप्तान छन् ।
एक वर्षअघि नेपाली फुटबल टिममा पनि विराज महर्जन राष्ट्रिय टिम र आफ्नो क्लबको कप्तान थिए ।
एउटा राष्ट्रिय टिम अर्को क्लब दुवैको कप्तान हुँदा खेलाडीको नाम मान अघि हुन्थ्यो नै त्यसलाई इन्जोए समेत गर्छन् । दुवै कप्तानी पद छाड्न उनीहरु चाहदैनन् ।
अनी टिमको नेतृत्व गर्न सबैको समर्थन पक्कै चाहिन्छ ।
राष्ट्रिय टिमको कप्तान रहिरहनु छ भने सबै खेलाडीको साथ चाहिन्छ आफ्नो टिमको । तर क्लबको कप्तान हुन आफ्नो टिम भित्रको समर्थनले पुग्छ ।
तर राजनीतिमा धेरै कुरा मिल्नुपर्छ । क्लबको (पार्टी) को कप्तान हुन क्लबका खेलाडीहरुको समर्थनले त पुग्ला कहिलेकाँही बाहिरी क्लबका खेलाडीले पनि यसमा चलखेल गर्न सक्छन् । यस्तै राजीनितको राष्ट्रिय टिमको कप्तान (प्रधानमन्त्री) हुन भने आफ्नो टिम क्लब र विपक्षी क्लबहरुको समर्थन पनि आवश्यक पर्छ ।
तर कहिलेकाँही आफ्नै टिमका खेलाडीले पनि अविश्वास गरिदिँदा कप्तानी पद धरापमा पर्न सक्छ । जसतो अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा देखिन थालेको छ ।
झण्डै दुई वर्ष अघि नै दुई उस्तै खाले टिम मिलाएर मर्ज गरेर यो एउटा ठूलो टिम बनेको थियो । उनीहरुको उस्तै उस्तै थिए तर फरक थिए । तैपनि एक ठाउँमा मिल्लन सहमत भए । अझैसम्म पनि पूर्ण रुपमा सबै मिल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छैन ।
राम्रोसंग जोडिएको छैन । टिम मिलाउँदै गर्दा त्यही भित्र चिरा पर्न थालिसकेको छ ।
अहिले राष्ट्रिय टिम र नेकपा टिमको कप्तान एउटै छन् केपी शर्मा ओली । उनी प्रधामन्त्री र नेकपाका अध्यक्ष हुन् । केही समयअघि उनले पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि सहायक कप्तानको रुपमा संगै राखेका थिए ।
कप्तानले आफूलाई कठिन भएको बेला सहकप्तान समेत बनाए । सहकप्तान टिम मर्ज हुनुअघि अर्को टिमको कप्तान थिए । केही वर्षअघि दुई टिमको कप्तान एउटै ठाउँमा हुँदा ओलीले दुई पाइलट विमान हाँक्ने जस्ता कुरा समेत गरेका थिए ।
तर अहिले मुख्य कप्तानको भूमिकामाथी त्यही टिमका तल्लो तहसम्मबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । केही खेलाडी मुख्य कप्तानको पूर्ण समर्थनमा छन् । मुख्य कप्तान पनि आफूलाई अझै धेरैको समर्थन रहेको भ्रममा छन् ।
राष्ट्रिय टिमको लागि ओली पाँच वर्षको कप्तानको रुपमा चयन भएका हुन् । उनको ३ वर्ष पूरा हुन लागिसकेको छ ।
क्लबपनि उनी त्यसअघि नै कप्तान थिए । दुई क्लब मर्ज भएपछि अब ठूलो भेला अर्थात महाधिवेशन गरेर फेरि अर्को कप्तान छान्ने प्रक्रिया शुरु हुन्छ त्यसमा के के हुन्छ कुन खेलाडी कताति ढल्कन्छन् हेर्न बाँकी छ ।
अहिले त्यो सबै विषयलाई मिलाउन आफू अनुकुल बनाउन मुख्य कप्तान ओली लागिपरेका छन् । बाहिर धेरै हल्ला चल्न थालेपनि कतै आफ्नो धरापमा त परेन भनेर उनले नजिकका खेलाडीसंग सल्लाह गर्न थालेका छन् । अनी आफ्नै टिमको अर्को गुटका ठूला खेलाडीहरु र अन्य खेलाडीहरुसंग छलफल गर्न पठाएका छन् ।
यस्तै मुख्य कप्तान ओलीले आफ्नो टिममा रहेका राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तानहरु पुष्प कमल दाहाल माधव कुमार नेपालसंग पनि छलफल गरेका छन् । उनको भनाई अझै केही समय म नै कप्तान बन्छु भन्नै छ ।
पूर्व कप्तानहरु पनि मुख्य कप्तानलाई चुनौती दिइरहेका छन् । नसके छाड्नुस् सम्म भन्न थालिसके । कप्तान हुन नपाएकाले समेत यो भन्न थालेका छन् ।
मुख्य कप्तानलाई अहले आफ्नै पुराना कप्तानले चुनौती दिइरहेका छन् । साथै अर्का टिमका कप्तानले पनि चुनौती दिएका छन् ।
विपक्षी टिमका कप्तान (देउबा लगायत)हरु चुपचाप जस्तै छन् । उनीहरुले खासै असर गरेको छैन । बरु आफ्नै टिमका पूर्व कप्तान खेलाडीले भड्काउला भनने पिर छ ।
त्यसैले ओलीले कप्तानका आकांक्षीसंग कुरा गर्न थालेका छन् ।
आफ्नो नजिकका खेलाडीलाई अर्को गुटमा बुझ्न पठाएका छन् । खबर चोरिरहेका छन् ।
जब खेलाडीहरु मिल्न छाड्न टिममा फाटो आउँछ गेम राम्रो हुँदेन । विपक्षीसंग हार्छ । तर यहाँ कोही विपक्षी छैन तत्काललाई एक्लै खेल भन्दा पनि आफैसंग हार्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विपक्षी टिमहरुलाई समेत संगै अगाडि बढाएर कोरोना विरुद्ध लड्दै देशलाई बचाउने बेला आएको छ ।
यसैबीच मुख्य कप्तान विपक्षी टिम र आफ्नै टिमलाई समेत धातक हुने नियम (अध्यादेश) बनाउन लगाउछन् । टिममा खासै छलफल नगरी रेफ्री (राष्ट्रपति)बाट पारित गराउँछन् । फेरि त्यसको विरोध र आलोचना सबैतिरबाट भएपछि खारेज नै गराउँछन् । त्यसपछि आलोचन हुन्छ । मुख्य कप्तान कमजोर बन्दै जान्छन् । अझै पनि त्यसको आलोचना सेलाइसकेको छैन । नियमको बारेमा मतविभाजन भइरहेको छ ।
ओली राष्ट्रियटिम र क्लब दुवैमा कप्तान कायम होला वा देशको कप्तान राखेर क्लबको कप्तान अर्को छाड्लान? त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । यसका लागि पूर्व कप्तानहरु र नयाँ बन्न चाहने कप्तानमा पनि भर पर्छ ।
ठूलो क्लब नेकपामा राष्ट्रिय टिमकै तीन पूर्व कप्तान (दाहाल नेपाल र जेएन खनाल) खनाल अहिले खासे अगाडि नआएपनि मुख्य कप्तान ओलीलाई दाहाल र नेपालबाट चुनौती छ ।
विपक्षीमा टिमम राष्ट्रिय टिमका कप्तान भएसकेका देउवा छन् । यस्तै टिम ठूलो बनाउन भर्खरै मर्ज भएको जनता समावादी पार्टी टिममा पनि राष्टरिय टिमका एक पूर्व कप्तान बाबुराम भट्टराई छन् ।
अहिले वर्तमानसहित राष्ट्रिय टिमका कप्तान भइसकेका ६ जना पोलिटिकल गेममा सक्रिय छन् ।
तर मुख्य भिडन्त भने वर्तमान कप्तान र दुई पूर्व कप्तानकै बीचमा छ ।
अब यो कप्तानको विषय तत्कालका लागि सेलाउला वा यसले अझै ठूलो रुप लिएर केही हलचल मच्चाउला हेर्न बाँकी नै छ । अर्को मुख्य कप्तानले अन्यलाई पछि कप्तान दिउँला भनेर फकाएर आफू कप्तानमा कायमै रहन पनि सक्छन् ।
Posted bynepalgovin May 1, 2020 Posted inPolitical GameLeaveacomment on पोलिटिकल गेम : वर्तमान कप्तानलाई पूर्व कप्तानहरुको चुनौती, के होला भविष्य?
काठमाडौं : फिस्स हाँस्ने उनको बानी तर लिगमा गोलको कीरतिमानी । सन्तोष साहुखलको परिचय यतिमा मात्र त पक्कै सिमित हुँदैन । पछिल्लो समय जापानमा बस्न थालेपछि उनी फेरिएका छन् ।
उनै सन्तोषले बुधबार नेपाली ए डिभिजन लिग इतिहासमा सय गोलको कोसेढुंगा पार गरे । नेपालको आधुनिक लिगमा सय गोल गर्ने पहिलो खेलाडीको कीर्तिमान बनाए ।
त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालमा भएको खेलमा सन्तोषले दुई गोल गरे । तर उनको टि च्यासल युथ क्लबले नेपाल पुलिस क्लबसंग २-२ को बराबरी खेल्दै अंक बाँड्यो । दुवै पटक पछि पर्दा सन्तोषले नै बराबरी गोल फर्काए ।
नेपाली फुटबल इतिहासमा अब सन्तोषको नाम लिगमा कीर्तिमानी गोलकर्ता अनी सय गोल गर्ने पहिलो खेलाडी भने रपनि लेखिनेछ ।
हाल जापनमा बस्ने सन्तोष लिगअघि मात्र नेपाल आएका हुन् । गत सिजन च्यासलबाट ६ खेल खेलेर ३ गोल गरेका उनी बीचमै जापान फर्किए । यस सिजन पूरा खेल खेल्नेगरी आएका उनी च्यासलका कप्तान समेत बनेका छन् । शुरुवाती दुई खेलमा ३ गोल गर्दै लिगमा गोल संख्या ९९ पुर्‍याएपछि धेरैको आशा थियो सन्तोषले तेस्रो खेलमै गोल गर्दै सय गोल पूरा गर्नेछन् । तर उनले तेस्रो र चौथो खेलमा गोल गर्न सकेनन् । दुई खेलको प्रतिक्षापछि पाँचौ खेलमा गोल गर्दै कीर्तिमान बनाए । ९९ गोल पुगेपछिको कुराकानीमा सन्तोषले आफूले सय गोल बारे खासै ध्यान नदिएको तर यस सलिगमा १५-१६ गोल गर्ने सोच रहेको बताएका थिए । सय गोल पुग्यो भनेपनि साधारण सेलेब्रेसन गर्ने बताएका थिए । उनको सयौँ गोल हेर्न नेपाली फुटबलदर्शकले केही समय कुर्नुपर्‍यो । तर उनले केही ढिला भएपनि कीर्तिमान बनाएरै छाडे ।
विस २०६० सालमा थ्री स्टारबाट खेल्दै लिगमा डेब्यु गरेका सन्तोषले त्यही सिजन संकटा क्लब विरुद्ध लिगको डेब्यु गोल गरेका थिए ।
उनले १६ वर्षपछि सय गोलको उपलब्धी हासिल गरे । सन्तोषले संकटा विरुद्ध पहिलो गोल जुन पोष्टमा गरेका थिए त्यही उत्तरतर्फको पोष्टमा बिहीबार १००औं लिग गोल गरे। अनी सन्तोषले लिगमा जुन गोलकिपलाई पहिलो गोल गरेका थिए तिनै उज्जल मानन्धर सन्तोषले सयौँ गोल गर्दा दर्शक बनेर हेरिरहेका थिए । सन्तोषले गोल गरेपछि उनले त्यो पहिलो गोल सम्झिएँ । कहाँबाट कसरी हाने भनेर वर्णय गर्दै थिए ।
सन्तोषले पहिलो गोल उज्जललाई हाने भने सयौँ गोल पुलिसका गोलकिपर शत्रुघन कुमार चौधरीलाई हाने । सयौँ र एक सय १औं नै चौधरी विरुद्ध भयो । लिगमा सन्तोषले १०१ गोल गरिसकेका छन् ।
नेपाली लिग इतिहासमा अब सन्तोष सय गोल गर्ने पहिलो खेलाडी बनेका छन् । यो एउटा कीर्तिमान बनिसकेको छ । इतिहास पनि । अब आउने नयाँ पुस्तालाई समेत यो उपल्बधी पछ्याउन गाह्रो छ । अहिले खेलिरहेका खेलाडीले त्यो उपलब्धी भेट्टाउन सायद मुस्किलै होला । उनै सन्तोष पनियो काम हुन निरन्तर लिग हुनुपर्ने बताउँछन् । तर यसले नयाँ खेलाडीलाई मोटिभेट गरोस् र आफ्नो रेकर्ड ब्रेक होस् भन्ने उनको चाहना भने छ ।
सन्तोषले सयौँ गोल गरेपछि जापानिस शैलीमा गोलको खुशी मनाए । तर खेलपछि भने सय गोलमा आफ्नो खासै ध्यान नभएको बताए । सय गोलको फिलिङ कस्तो होला भने रसञ्चारकर्मीले बारम्मबार प्रश्न गर्दा पनि नले पुरानै शैलीमा फिस्ट हाँसे र नर्मल भनेर टारिदिए ।
पुलिस विरुद्ध दुई गोल गरेपछि सन्तोष यस सिजन लिगमा धेरै गोल गर्नेमा अगाडि छन् । सन्तोषको ५ गोल छ । च्यासल विरुद्ध एक गोल गरेका पुलिसका सुमन लामाको ४ गोल छ र उनी सन्तोषलाई पछ्याइरहेका छन् ।
अधिकांश समय थ्री स्टारमै बिताएका सन्तोषले लिगमा थ्री स्टारका लागि मात्रै ७१ गोल गरेका छन् । यस्तै मनाङ मर्स्याङ्दीका लागि १६ र एपीएफका लागि ६ गोल गरका छन् । दुवै क्बलमा उनले एक-एक सिजन खेलेका थिए । च्यासलबाट भने गत सिजनसहित ८ गोल गरेका छन् ।
खेलपछि पोष्ट म्याच कन्फ्रेन्समा उनै सन्तोषले राखेको धारणा उनकै शब्दमा:
सय गोल भन्दा पनि आफ्नो टिमलाई कसरी जिताउने सोचिरहेको थिएँ । त्यो सय गोललाई मैद्ये त्यति महत्वमा राखेको थिएन । टिमलाई कसरी जिताउने टिमलाई कसरी माथि पुर्‍याउने भन्ने नै सोचेको थिएँ । प्रेसर तयस्तो खासै केही थिएन । टिममा केही नमिलेर भएकर पछिल्लो दुई खेलमा गोल भएन । १०० भन्दा ५० गोल गर्दा उत्सहित भाथेँ । सय गोललाई खासै केही लागेको छैन । नयाँ अब आउने खेलाडीहरुको लागि यसलाई अझै तोडेर मोटिभेसन हुन्छ । च्यासल टिमला२ कसरी माथि पुर्‍याउँ भन्ने नै छ ।
लिग निरन्तर भयो भने कुनै न कुनै टिमले चाँही सय गोल पुर्‍याउन सक्छ जस्तो लाग्छ । बिहान उठ्दा पनि टिमलाई कसरी जिताउने र के गर्दा जितछ भने रसोचेको थिएँ । आज गेम सकिकँदा ला ड्र भयो जित्न पर्ने जस्तो लाग्यो । अब अर्को खेल कसरी राम्रो खेल्ने भन्ने त्यो महत्वपूर्ण थियो । प्रेसर थिएन ।
सय पुगेको रहेछ भन्ने नै भयो ।
मलाई मोटिभेट गरेको सुरेन्द्र दाईहरुले हो । दाईको ५० गोल पुग्दा म पनि त्यो पुर्‍याउछु भन्ने थियो । त्यसपछि के त भन्ने थियो । १०० गोल पुर्‍याउनु भन्न भयो । यसै सिजन लिगको दोस्रो खेलमा मछिन्द्रसंग गरेको गोल मेरो बेस्ट गोल हो ।
मेरो सेड्युल मिल्यो भने र राष्ट्रिय टिमबाट बोलायो भने राष्ट्रिय टिममा पनि फर्किन सक्छु ।
राष्ट्रिय टिमबाट धेरै खेल्न पाएन भन्ने लाग्थ्यो । लिगमा धेरै गोल गर्दा पनि राष्ट्रिय टिममा खेल्न पाउँथेन ।
Posted bynepalgovin January 8, 2020 Posted inFootball, FootballLeaveacomment on फिस्स हाँस्ने केटोको कीर्तिमानी १०० गोल
Posted bynepalgovin January 6, 2020 Posted inFootball, FootballLeaveacomment on ८८औं मिनेटमा विमल रानाको गोल, मनाङ र मछिन्द्रले खेले २-२ को बराबरी